Category: संस्मरण / निबन्ध / नियात्रा | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home सिर्जना संस्मरण / निबन्ध / नियात्रा
“बुहारीलाई तपाईहरू के भन्नु हुन्छ ?” “बुहारी, दुलही, दुलही नानी ।” साथीहरूको विभिन्न जवाफ आयो । “त्यही भएर त तपाईहरूको बुहारीलाई हेला गर्नुहुन्छ । हाम्रो जातमा त बुहारीलाई छोरीभन्दा पनि ठुलो मानिन्छ । थाहा छ किन ? हामी बुहारीलाई नानी भन्छौं । नानीको अर्थ थाहा छ तपाईहरूलाई ?” “सानो मान्छे,	Read more
अर्थशास्त्रको विद्यार्थी छँदा बारम्बार घोकेको वाक्यांश थियोः भिसिअस साइकल अफ पभर्टी । अर्थात् गरिबीको दुश्चक्र । सहरमा विकासका बहसहरू चल्दा गुमनाम हुने ‘कर्णाली’ गरिबीको उदाहरण दिँदा भने सबैभन्दा पहिले आइपुग्थ्यो । गरिबी र कर्णाली पर्यायवाची शब्दजस्ता लाग्थे । कर्णालीको गरिबी विकासका अँध्यारा पानामा अभिलेखित मात्र थिएन कर्णाली क्षेत्रका मनमुटुबाट ओकलिने	Read more
असजिलो छ छोरीमान्छेको जीवन । छोरी बाको बन्धन, विवाहपछि पतिको बन्धन । पतिपछिको बन्धन छोराको । सामाजिक पोयाको कठोर बन्धन त झन् कसिएकै हुन्छ निरन्तर । पुरानो समय नजन्मिउन्जेल नछोरा नै हो कि ! आमाप्रति थोरै सद्भाब रहन्थ्यो । अचेल त प्रविधिले पहिल्यै देखाइदिन्छ के हो ? छोरी भनेपछि आमाको	Read more
on: चैत्र १९ , २०७८ शनिबार- ०९:३९
जनै तागाधारीको सबभन्दा बलियो प्रमाणपत्र हो । प्रमाणपत्र मात्र हैन, प्रमाणै हो । जनै छैन भने उसको जात पनि छैन । काँधमा जनै छैन भने बाहुनक्षत्री जस्तो ‘चोखो जात’ हुँ भन्दैमा कसले पो पत्याउँछ र ! हैन कसैलाई जातभातको मतलबै छैन भने त यी सब कुरा किन चाहियो	Read more
जीवनले पचासौँ वसन्तलाई स्पर्श गरिसक्यो । बितेका पचास वर्षका पलहरुलाई कताबाट समेटूँ, कताबाट बिटो कसूँ, आज आफैँ रनभुल्लमा परेको छु । फेरि जताबाट समेल्न खोज्दा पनि समेली नसक्नु गरी फुस्की जान्छन् समयका सूक्ष्म त्यान्द्रात्यान्द्री । एउटा मजबुत किटो कस्न खोज्छु त्यसमा बाँधिन मान्दैन समय । आजसम्मको जिन्दगी असरल्ल छरिएरै	Read more
on: फाल्गुन २१ , २०७८ शनिबार- ०६:४१
मेरो गाउँमा भ्यागुतानन्दहरुको घरै घर छ, जल, थल सबैतिर । भनौँ म पनि ती भ्यागुतानन्दहरुको आनन्दानुभूतिलाई सर्वस्व ठानेर हायसञ्चो मानेर दिन काटिरहेको छु उनीहरुकै सारमा । घरघरमा भ्यागुतानन्दहरु वर्षा वन्दना गरेर बस्छन । भ्यागुतानन्दहरु घरमा बस्दा चन्दन टीका लाएर आकाशतिर फर्केर ट्वार्रटवर्र गरिरहन्छन भने घर बाहिर हुँदा सर्पहरुको क्रियाकलाप	Read more
जंगलको छेउमा हामो मकैवारी थियो । वर्षा याममा तिनै मकै खान वनदेवताले वाँदर पठाइहन्थे। तिनलाई ढयाङ्ग्रो ठटाए लखेटने मेरो ड्युटी थियो । ड्युटी पनि साहै रमाइलो थियो दिन वितेको पत्तो हुदैनथ्यो। साँच्चै रमाइलो हुन्थ्यो वारिपट्टि बारीको छेउमा वसे पारिपट्टि रूख भिरमा दौडिने वाँदररहरूको चर्तिकला हेर्न। कहिलेकाहीँ ती पनि मान्छे	Read more
on: फाल्गुन १८ , २०७८ बुधबार- ११:३७
चुनावहरु आउँछन् । सहरका नामहरु निकै जपिन्छन् । पछिल्लो पटक सम्पन्न प्रतिनिधी, प्रदेस शभा र स्थानीय तहका चुनावहरुमा पनि सहरहरु खुब जपिए । सबै सहरहरुले आफ्नो नाम अगाडी धेरै बिशेषणहरु थप्न पाए । सुन्दरता थप्न प्रयोग गरिने जानेभरका विशेषणहरु बोले नेताहरु । जस्तो कि स्मार्ट, नमूना, हरित, नम्बर वन,	Read more